Madaxda Faransiiska iyo Jarmalka oo booqanayo Ruushka iyo Ukraine. – XAMAR POST
Madaxda Faransiiska iyo Jarmalka oo booqanayo Ruushka iyo Ukraine.
By Mohamed Abdi On Feb 5, 2022
Madaxweynaha Faransiiska iyo Ra’iisul Wasaaraha Jarmalka ayaa toddobaadyada soo socda u ambabixi doona Moscow iyo Kyiv, iyagoo doonayo dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu joojiyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu billaabo duullaanka Ukraine iyo sidii loo heli lahaa waddo looga baxo xiisadaha sii kordhaya.
Faransiiska Emmanuel Macron ayaa la qorsheeyay inuu booqdo Moscow Isniinta iyo Kyiv Talaadada, halka Jarmalka Olaf Scholz uu u safri doono Kyiv Febraayo 14 iyo Moscow 15ka Febraayo.
Booqashadan heerka sare ah ayaa ku soo beegantay iyadoo Shiinuhu uu taageeray dalabka Ruushka ee ah in NATO laga ilaaliyo inuu isku fidiyo Ukraine, ka dib markii Maraykanku ku eedeeyay Kremlin-ka qorshe faahfaahsan oo lagu abuurayo weerar ay geystaan ​​ciidamada Ukraine oo Ruushku u adeegsan karo marmarsiiyo tallaabo ciidan oo uu qaado, Maraykanku ma uusan bixin macluumaad faahfaahsan oo taageeraya sheegashadaas, taasoo Moscow ay si adag u beenisay.
Inkasta oo Faransiisku uu yahay ciyaaryahan weyn oo NATO ah isla markaana uu u guurayo Romania oo qayb ka ah isu diyaarinta isbahaysiga ee ficilka suurtagalka ah ee Ruushka, Macron wuxuu sidoo kale si firfircoon u riixay wadahadal uu la yeesho Putin oo uu la hadlay dhowr jeer
toddobaadyadii la soo dhaafay. Labaduba waxay yeelan doonaan kulan-hal-hal ah Isniinta, xafiiska Macron ayaa sheegay Jimcihii.
Senegal oo xilka gudoomiyenimada Midowga Afrika kala wareegay dalka Congo DRC.
General Xuud “waan diidanahay in Cali Guudlaawe uu yimaado B/weyne.